Ukugcizelela yi-Ultrasonic Cavitation - Hielscher Ultrasound Technology
Imikhiqizo eminingi ephakathi kanye nabathengi, njengezimonyo nezilonda zesikhumba, amafutha okugaya imithi, ama-varnishes, amapende kanye namafutha kanye namafutha asekelwe ngokuphelele noma ingxenye ye-emulsions. I-Hielscher ikhiqiza izinqubo zamanzi zamanzi ezimboni ezinkulu emhlabeni wonke ukuze kusetshenziswe ngokuphumelelayo imifudlana emikhulu yemithombo yezitshalo zokukhiqiza.
Kulebhu, amandla e-emulsification we-ultrasound awaziwa futhi asetshenziswa isikhathi eside. Le vidiyo ngezansi ikhombisa ukukhipha amafutha (okuphuzi) emanzini (obomvu) ngokusebenzisa idivayisi ye-UP400S lab lab.
Le vidiyo ikhombisa i-Hielscher ultrasonicator UP400S elungiselela i-nano-sized uwoyela-emanzini.
Ukugcizelela Amafutha emanzini kusetshenziswa i-UP400S
Izinhlelo eziqukethe eziningana Amaprosesa ase-ultrasonic angama-watts angu-16,000 ngayinye, unike amandla okudingekayo ukuhumusha lolu hlelo lokusebenza lwelebhu ngendlela ephumelelayo yokukhiqiza ukuze uthole ukuthuthwa kwe-emulsions ehlelekile ekugezeni okuqhubekayo noma ku-batch – ukufezekisa imiphumela efana ne-homogenizers ephakeme kakhulu ephezulu yanamuhla, efana ne-valve entsha ye-orifice. Ngaphezu kwalokhu kusebenza okuphezulu emulsification eqhubekayo, amadivaysi e-Hielscher ultrasonic adinga ukugcinwa okuphansi kakhulu futhi kulula kakhulu ukusebenza nokuhlanza. I-ultrasound iqinisile isekela ukuhlanza nokuhlanza. Amandla we-ultrasonic ayaguquguquka futhi angashintshwa kumikhiqizo ethile kanye nezidingo ze-emulsification. Izigameko ezikhethekile ze-flow cell (cell-reactors) zihlangana ne-CIP ethuthukile (ihlanzekile-indawo) kanye nezidingo ze-SIP (inzalo-in-place) nazo ziyatholakala.
Emulsions kukhona ukuhlakazeka kwezinhlobo ezimbili noma ezingaphezulu zokungcola okungaziwa. I-ultrasound enamandla kakhulu inikeza amandla adingekayo ukusabalalisa isigaba samanzi (isigaba esasakazekile) ngamaconsi amancane esigabeni sesibili (isigaba esiqhubekayo). Endaweni yokuhlakazeka, ukufaka ama-bubble cavitation kubangele ukushaqeka okukhulu kwamanzi okuzungezile futhi kubangele ukubunjwa kwamanzi ahlanzekile e-liquid velocity.
Ukuze kuqiniswe ama-droplets asanda kuhlanganiswa kwesigaba sokuhlakazeka ngokumelene ne-coalescence, ama-emulsifiers (izinto ezibonakalayo ezibonakalayo, ama-surfactants) kanye nokuqiniswa okungeziwe ku-emulsion. Njengoba u-coalescence wamaconsi ngemuva kokuphazanyiswa kuthinta ukusatshalaliswa kokusatshalaliswa kokusakaza kwe-droplet, kusetshenziselwa ukusimama kokugcina kwe-droplet esezingeni elilingana nokusatshalaliswa ngokushesha ngemuva kokuphazanyiswa kwe-droplet endaweni ye-dispersing ultrasonic. Ukuqiniswa kwamandla kagesi kuholela ekuphazanyeni kwe-droplet ekuthuthukiseni amandla.
Ukuhlolwa kwamafutha emanzini (isigaba samanzi) namanzi emafutheni (amafutha esigabeni) ama-emulsions abonise ukuhlangana phakathi kwesisindo samandla nosayizi we-droplet (isib. Ububanzi be-Sauter). Kukhona ukuthambekela okucacile kwesayizi encane ye-droplet ekwandeni kwamandla kagesi (chofoza ku-graphic graphic). Emazingeni afanelekayo wezinga lamandla, i-ultrasound ingakwazi ukufeza ubukhulu obukhulu be-droplet ngaphansi kwe-micron 1 (microemulsion).
Amadivayisi we-Ultrasonic we-Emulsification Esebenzayo
I-Hielscher inikeza ububanzi obubanzi bamadivayisi we-ultrasonic kanye nezesekeli zokusebenza kahle kwe-emulsification nokuhlakazeka kweziphuzo.
Laboratory Ultrasonic Amadivayisi afika ku Ama-watts angu-400 amandla avumela ukulungiswa okulula kwama-emulsions kuma-tubes wokuhlola, Izitsha ze-Eppendorf, beakers noma flow flow cells. Lawa madivaysi asetshenziselwa ukulungiselela isampula noma izifundo zokuqala zokusebenza futhi atholakalayo ukuqashwa.
500 futhi 1,000 futhi 2,000 Watts Processors ultrasonic like the I-UIP1000hdT isethwe ngokugeleza kweseli futhi izimpondo ezihlukahlukene ze-booster kanye ne-sonotrodes zingasusa imifudlana emikhulu yevolumu. Amadivaysi afana nalokhu asetshenziselwa ukulungiswa kwemingcele (njenge: amplitude, umshini wokusebenza, izinga lokugeleza njll) ebhentshini eliphezulu noma umshayeli wesitshalo.
industrial processors ultrasonic of 2, 4, 10 futhi 16kW kanye namaqoqo enkulu amayunithi eziningana ezinjalo kungaba ukucubungula ukukhiqizwa umthamo ukusakaza cishe kunoma iyiphi ezingeni.
Cela ulwazi oluthe xaxa nge-ultrasonic emulsifying!
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela ulwazi olwengeziwe mayelana nokwenziwa kwe-emulsions nge-ultrasonication. Sizojabula ukukunikeza uhlelo lwe-ultrasonic ukuhlangabezana nezidingo zakho.
Behrend, O., Schubert, H. (2000): Ithonya le-viscosity yesigaba eqhubekayo emulsification nge-ultrasound, ku: Ultrasonics Sonochemistry 7 (2000) 77-85.
Behrend, O., Schubert, H. (2001): Umthelela wokucindezela kwe-hydrostatic kanye nokuqukethwe kwegesi kwi-emulsification eqhubekayo ye-ultrasound, ku: Ultrasonics Sonochemistry 8 (2001) 271-276.
Hielscher, T. (2005): Ukukhiqizwa kwe-Ultrasonic ye-Nano-Size Dispersions kanye ne-Emulsions, ku: Proceedings of European Nanosystems Conference ENS’05.
I-Landfester, K. (2001): I Generation of Nanoparticles in Miniemulsions; Ku: Izinto eziphambili ze-2001, 13, No-10, Meyi17th. I-Wiley-VCH.